Kamed ब्रांड | निing्गो केयर मेडिकल उपकरण कं, लिमिटेड
सरल र प्रभावी
म चण्डलर हुँ, KAMED ब्रान्डको संस्थापक। यो ब्राण्ड हो जसमा म गर्व गर्छु। जब म मेरा ग्राहकहरु विदेशमा भेटें, तिनीहरूले सँधै सोधे किन किन यसलाई KLAYD भनिन्छ? के यसको कुनै खास अर्थ छ? मैले हो भने। यो मसँग मेरा बाबुआमाको बारेमा लामो कथा हो। त्यो क्षणमा मेरो स्मृति त्यो समयमा गयो ...
वर्ष २०० 2003 my मेरो विश्वविद्यालयको स्नातक को पूर्ववर्ती मा, SARS गार्ड बन्द आए। अनगिनत चिकित्साकर्मीहरू सार्सको बिरूद्ध लडाईको पहिलो लाइनमा साहसपूर्वक लडिरहेका थिए। केही चिकित्सकहरूले समेत यस युद्धमा आफ्नो अनमोल जीवन गुमाए। हामी मेडिकल युनिभर्सिटीबाट स्नातक हुन लागेका छौं, हामीले महसुस गर्यौं कि हाम्रो ठूलो जिम्मेवारी छ र हामी प्रयास गर्न उत्सुक छौं। हामी स्नातक र सकेसम्म चाँडो डाक्टरहरूको टोलीमा सामेल हुने आशा राखेका छौं, थप बिरामीहरूलाई बचाउनको लागि हाम्रो शक्ति समर्पित गर्नुहोस्, र यस संसारको मूल शान्ति र शान्ति पुनर्स्थापित गर्नुहोस्। तथापि, मेरो लागि, मेरो सहपाठी जस्तो चिन्ता बाहेक, मेरा आफन्तहरूको पनि चिन्ता छ।
मेरो आमा र भाइ ग्वांगजाउमा बस्नुहुन्थ्यो, सार्सको गम्भीर रूपमा प्रभावित क्षेत्र, र उनीहरूको जीवन कुनै पनि समयमा संक्रमणद्वारा खतरामा थियो। म हरेक दिन एक परेशान मुडको साथ मेरी आमालाई कल गर्छु। जब कल उठाइयो, मेरो झुण्डिएको मुटु अचानक आराम भयो, मेरी आमाको काखमा बच्चा जस्तै खुशी भयो, लामो हराएको तातोपन र प्रेम महसुस गर्दै। भाग्यवस, SARS महान मेडिकल स्टाफ द्वारा हल गरियो जब म स्नातक भएँ। हामी सबै यो कडा-जिताएको नयाँ जीवनको कदर गर्छौं। त्यस बेलादेखि, मेरो मुटुमा एक बीउ रोपिएको छ: मेरो परिवारको राम्रो देखभाल गर्नुहोस् र एउटा ब्रांड बनाउनुहोस् जसले मलाई धेरै व्यक्तिहरूको फाइदाको लागि केहि सिक्न अनुमति दिँदछ।
वर्ष २००—— - एक फार्मास्युटिकल कम्पनीमा दुई वर्षको प्रशिक्षण पछि, मैले चिकित्सा उपभोग्य वस्तुहरू, चिकित्सा उपकरणहरू, उत्पाद प्यारामिटरहरू, र चिकित्सा उपकरणहरूको प्रयोग विधिहरू सहित औषधिको बारेमा धेरै कुरा सिकें। कामको दुई बर्ष अनुभवले मलाई जति सक्दो चाँडो मेरो सपना साकार गर्न र मैले सिकेको कुरा लागू गर्न सक्षम बनाउने कुरा बनायो। यसैले मैले आफ्नो जागिर छोडिदिएँ र त्यस बर्षको नोभेम्बरमा मेरो आफ्नै उद्यम यात्रा सुरु गरे। मैले एउटा कम्पनी स्थापना गरें CARE MEDICAL। म यो नाम छनौट गर्न हिचकिचाएन। किनकि मैले लगभग आफ्नो प्रियजन गुमाएको छु र मलाई आफ्नो परिवारको राम्रो देखभाल गर्न पहिलेभन्दा अझ बढी राम्रो भावना र जिम्मेवारी बनाउन सक्षम बनाइरहेको छ। मलाई आशा छ कि मेरो कम्पनीले उनीहरूका आफन्तहरूको महत्त्व र अपरिवर्तनीयताको मान्यता अधिक युवाहरूमा फैलाउनेछ। हाम्रो विज्ञापन नारा हो: तपाई राम्ररी हेरचाहको लागि योग्य हुनुहुन्छ…। वास्तवमा तपाईको परिवारलाई राम्ररी हेरचाहको आवश्यकता छ, र तपाईमाथि तपाईको परिवारको लागी अस्वाभाविक जिम्मेवारी छ।
वर्ष २०० --- --- एक सामान्य दिन, मैले मेरो बुवाबाट कल प्राप्त गरें। उसले मलाई उसको पेटमा रक्तस्रावको बारेमा भन्यो। मैले तुरुन्तै जे गरिरहेको थिएँ उसलाई छोडिदिएँ र सिधै अस्पतालमा लगें। दुर्भाग्यवश, मेरो बुढा बुबालाई आन्द्राको क्यान्सर भएको पत्ता लागेको थियो। मेरो बुबा अस्पतालमा भर्ना भएको बेलामा, म हातमा सबै राख्छु र दिनदिन उहाँसँगै बस्छु। जब मैले देखें कि मैले बेचेका विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरू र उपकरणहरू मेरो बुबाको शरीरको लागि अपनाइएको छ, तब अचानक मैले महसुस गरें कि मेरो उत्पादनहरू प्रयोग गर्ने सबैका लागि म जिम्मेवार छु। अस्पतालमा प्रवेश गर्ने प्रत्येक बिरामीले यी उत्पादनहरूमा आशा र भविष्य राख्छन्, विशेष गरी क्यान्सर बिरामीहरू। जब म ओछ्यानमा सबैसँग कुराकानी गर्थे, तिनीहरूले भने कि तिनीहरू विज्ञान र डाक्टरहरूमा विश्वास गर्छन्। तिनीहरूसँग यस रोगसँग लड्न दृढ विश्वास छ। त्यस्तै कुराकानीले मेरो आत्मालाई गहिरो चोट पुर्‍यायो र मलाई एक नारा जस्तो जस्तो फोकसबाट गुण बनाउँदछ। दुर्भाग्यवस, मेरो बुबाले उपचारको एक वर्ष पछि मलाई सँधैको लागि छोड्नुभयो। जे होस्, मैले सिकेको छु कि हामी व्यापार गर्न प्रत्येक उत्पादको अन्तिम पूर्णता प्राप्त गर्न तल-पृथ्वीमा हुनुपर्दछ, अधिक व्यक्तिमा आशा र सुन्दरता ल्याउँदै।
हाम्रो कम्पनीका कर्मचारीहरु सँधै जिम्मेवार र सामाजिक उत्तरदायित्व को एक कडा भावना को साथ काम। तसर्थ, दस बर्ष भन्दा बढी कठिन उद्यमशीलता प्रक्रियामा, हाम्रो उत्पादन विकास र आपूर्तिकर्ता चयन स्क्रीनिंग को तहहरु पार गरीएको छ। गुण नियन्त्रणको सर्तमा, हाम्रो विश्वास हो: मापदण्ड पूरा नगर्ने उत्पादनहरू सुरूवात हुँदैन, र मापदण्ड पूरा नगर्ने उत्पादनहरू सिफारिस गरिदैन। सहयोग साझेदारहरूको सर्तमा, हाम्रो छनौट हो: इमान्दारी र गुणस्तरको बोध नभएको कम्पनीहरूले अधिक सडेको उत्पादनहरू बजारमा जानबाट रोक्न सहयोग गर्दैनन्। हाम्रो कम्पनीको उद्यमशीलता दर्शन भनेको उपभोक्ताहरूको लागि सुरक्षित र प्रभावकारी उत्पादनहरू विकास गर्नु हो। हामीले उत्पादनहरूलाई अन्त्य गर्‍यौं जुन हाम्रो कम्पनीको दर्शनको विपरित हो किनभने उनीहरूले उपभोक्ताहरूको अनुभवलाई मात्र संतुष्ट गर्न सक्दैनन तर हाम्रो ब्रान्डको सामाजिक मूल्यलाई पनि हानी गर्दछन्। KLAYD एक ब्रान्ड मात्र होईन, तर विश्वास र गुणवत्ता मूल्य जुन पूर्णतालाई पछ्याउँदछ र कहिले सम्झौता गर्दैन।